Yakavanzika Policy - Motio
1.0 ZVINODZIDZISWA NENYAYA IYI YEMAHARA
1.1 General. Iyi Yakavanzika Policy inotsanangura maitiro isu, Motio, Inc., Texas mubatanidzwa, unganidza, shandisa, uye ubate ruzivo rwako kana iwe uchishandisa webhusaiti yedu uye masevhisi. Takazvipira kuchengetedza nekuremekedza zvakavanzika zvako uye nekuona kuti yako data yakagadziriswa nenzira kwayo uye zviri pamutemo zvinoenderana neese akakodzera mutemo wega wega. Kana iwe uine chero mibvunzo pamusoro peichi chirevo chekuvanzika, kusanganisira chero zvikumbiro zvekushandisa kodzero dzako dzepamutemo ndapota tumira email ine chinyorwa che "Motio Webhusaiti - Yakavanzika Bvunzo Inobvunza ”kune webhusaiti-yekuvanzika-mutemo-kubvunza AT motio DOT com.
1.2 Makambani Asina Kudzorwa. Iyi Yakavanzika Policy haishande kune zvinoitwa nemakambani izvo Motio haina muridzi kana kutonga kana kune vanhu izvo Motio haashandisi kana kutarisira.
2.0 INFORMATION KUSANGANISIRA NEKUSHANDISA
2.1.1 General Kuunganidzwa. Motio inounganidza ruzivo rwemunhu kana iwe uchinyoresa seNhengo kana Muenzi na Motio, paunoshandisa Motio zvigadzirwa kana masevhisi, kana iwe uchishanyira Motio mapeji kana iwo mapeji eimwe Motio shamwari, uye paunopinda promotions kana sweepstakes. Motio inogona kusanganisa ruzivo nezvewe isu isu neruzivo rwatinowana kubva kune vebhizinesi vatambi kana mamwe makambani, kana nechinangwa chekubvumidzwa kwenhengo.
2.1.2 Ruzivo Rwakatsvaga uye Rwakaunganidzwa. Paunonyoresa ne Motio, tinokumbira ruzivo rwemunhu wega sezita rako, kero ye-e-mail, zita, indasitiri uye rumwe ruzivo rwusingawanikwe paruzhinji. Paunenge iwe wanyoresa ne Motio uye kusaina kusaiti yedu webhusaiti, iwe hauna kuzivikanwa kwatiri.
2.1.3 IP Kero. Motio Webhu sevha inozviona yega ye IP kero yemushanyi. Kero yeIP inhamba yakapihwa komputa yako paunosangana neInternet. Sechikamu cheprotocol yeInternet, maSeva eWebhu anogona kuona komputa yako neiyo IP kero. Pamusoro pezvo, maSeva eWebhu anogona kuona mhando yebrowser yauri kushandisa kana kunyange mhando yekomputa. Kunyangwe isiri tsika yedu kubatanidza IP kero kune rako pachako rinozivikanwa ruzivo, isu tinochengetera kodzero yekushandisa IP kero kuziva mushandisi kana isu tichifunga kuti zvakakosha kuchengetedza chinogombedzera kufarira kwedu Webhusaiti, vashandisi veWebhusaiti yedu kana vamwe kana kutevedzera mitemo, kuraira kwedare, kana kukumbira kutevedzwa kwemutemo.
2.1.4 Shandisa. Motio inoshandisa ruzivo rwezvinotevera zvinangwa zvakajairika: kugadzirisa zvirimo zvaunoona, kuzadzisa zvikumbiro zvako zvezvigadzirwa nemasevhisi, kunatsiridza masevhisi edu, kutibatsira mukupa zvigadzirwa zvirinani nemasevhisi, kubata iwe, kuitisa tsvagiridzo, kushandira account yako nesu uye kupindura mibvunzo yako, uye kupa isingazivikanwe kuzivisa kunatsiridza masevhisi.
2.2 Kugovana Ruzivo uye Kuzivisa
2.2.1 Tine vatengi pasi rese asi kuti tikupe masevhisi edu, tinotumira data rako kuUnited States. Kana iwe ukawana iyo saiti kubva kunze kweUnited States, iwe unobvumidza kuve neyako yega data kuendeswa kune nekugadziriswa muUnited States.
2.2.2 Kugovana Ruzivo rweMunhu. Motio hairende, kutengesa, kana kugovana ruzivo rwemunhu nezvako nevanhu vasina hukama kana makambani kunze kwekupa zvigadzirwa kana masevhisi awakumbira, kana tiine mvumo yako, kana pasi pemamiriro anotevera:
2.2.2.1 Isu tinogona kupa ruzivo kune vanovimbana navo vanoshanda vakamirira kana ne Motio pasi pezvakavanzika zvibvumirano. Aya makambani anogona kushandisa ruzivo rwako rwega kubatsira Motio kutaurirana newe nezve zvipo kubva Motio uye vatinoshanda navo kushambadzira. Zvisinei, makambani aya haana kodzero yekugovana ruzivo rwako kana kurushandisa chero chimwe chikonzero.
2.2.2.3 Tinotenda kuti zvakafanira kugovana ruzivo kuitira kuti tiongorore, tidzivirire, kana kutora matanho maererano nezviito zvisiri pamutemo, fungidziro yekubiridzira, mamiriro ezvinhu anosanganisira kutyisidzira kuchengetedzeka kwemunhu chero upi zvake, kutyorwa MotioMitemo Yekushandisa, kana sekumwe zvinodiwa nemutemo; uye
2.2.2.4 Tinotamisa ruzivo nezvewe kana Motio inowanikwa kana kubatanidzwa neimwe kambani. Pakadaro, Motio inokuzivisa iwe ruzivo rwako rusati ruchinjirwa uye ruchiiswa pasi pemutemo wekuvanzika wakasiyana.
2.2.3 Ad Targeting. Motio inochengetera kodzero kune rimwe zuva ramangwana kuratidza kushambadzira kwakanangwa kunoenderana neruzivo rwevanhu. Vashambadziri (kusanganisira makambani anoshandira kushambadzira) vanogona kufunga kuti vanhu vanofambidzana navo, vanoona, kana kudzvanya pazvishambadziro zvakanangwa vanosangana nezvinotariswa - semuenzaniso, vakadzi vane makore 18-24 kubva kune imwe nzvimbo yenzvimbo.
2.2.3.1 Motio haina kupa chero ruzivo rwemunhu kune mushambadzi kana iwe uchifambidzana kana kana kuona mumwe wako promotions. Nekudaro, nekudyidzana kana kuona kushambadza urikubvumira kuti mukana wekuti mushambadzi aite fungidziro yekuti unosangana nezvinotariswa zvinoshandiswa kuratidza kushambadza.
2.3.1 Kodzero dzakachengetedzwa. Motio inogona kuseta uye kuwana Motio makuki pakombuta yako. Cookies tambo pfupi dzemavara dzakatumirwa kubva paWebhu server kuenda kune Webhu browser apo bhurawuza rinowana Webhusaiti. Mumashoko akapusa, apo bhurawuza rinokumbira peji kubva paWebhu server iyo yakatanga yatumira kuki, bhurawuza rinotumira kopi yekuki kudzoka kune iyo Webhu server. Kuki inowanzo kuve, pakati pezvimwe zvinhu, zita rekuki, nhamba yakasarudzika yekuziva, uye zuva rekupera uye zita reruzivo ruzivo. Cookies anoshandiswa kuita zvemunhu, kuteedzera uye zvimwe zvinangwa. Cookies anogona kunge ari "musangano-chete" kana "kuramba". Kuramba makuki anogara kwekushanya kanopfuura kamwe uye anowanzo shandiswa kubvumidza mushanyi kune yedu Webhusaiti kuti aenzanise ruzivo rwavo. Tinogona kushandisa makuki kuongorora traffic iri pawebhusaiti yedu (sevashanyi vese uye mapeji anoonekwa), kugadzirisa hunhu kana kukuchengetedza dambudziko rekutorazve zita rako kana rumwe ruzivo, uye kugadzirisa Webhusaiti inoenderana nedata tinounganidza. Isu hatichengetedze mapassword kana rumwe ruzivo rwakashata mumakuki. Iko kushandiswa kwemakuki kwave kwakajairika muindasitiri yeInternet, kunyanya paWebhu saiti dzinopa chero rudzi rwebasa rakagadzirirwa. Iko kushandiswa kwemakuki nevanopa zvemukati nevashambadzi kwave kuita kwakajairika muindasitiri yeInternet.
2.4 Iyi Policy Isinga Shande kune Mamwe Makambani. Motio inochengetera kodzero yekubvumidza online promotions nemamwe makambani (semuenzaniso IBM) pane mamwe mapeji edu anogona kumisikidza nekuwana makuki avo pakombuta yako. Mamwe makambani anoshandisa makuki avo zvinoenderana nemitemo yavo yekuvanzika, kwete iyi. Vanoshambadzira kana mamwe makambani havana mukana wekuwana MotioCookies.
2.5 Webhu Bhikoni. Motio ingashandisa Web zvikoni kuwana Motio makuki mukati nekunze kwenetiweki yeWebhu saiti uye zvine chekuita ne Motio zvigadzirwa nemasevhisi.
2.6 Ongororo. Motio inoshandisa echitatu-bato masevhisi senge Google Analytics kuongorora saiti traffic. Aya masevhisi anogona kuunganidza ruzivo senge komputa yako yekushandisa sisitimu uye browser mhando, IP kero, kero yeanotaura webhusaiti, kana iripo, nezvimwe uye anogona kuteedzera nzira yemushandisi kuburikidza nemawebhusaiti edu.
3.0 KUKWANISA KWAKO KUTAURA YAKO Nhoroondo YENYAYA uye ZVINODIWA
3.1 Kugadzirisa. Unogona kugadzirisa yako Motio Rangu Akaundi Ruzivo chero nguva.
3.2 Motio Kushambadzira uye Nhau. Tinogona kukutumira zvimwe zvekutaura zvine chekuita ne Motio sevhisi, senge zviziviso zvebasa, mameseji ekutungamira uye Motio Tsamba yemapepanhau, ayo anoonekwa sechikamu chenyu Motio account. Kana iwe usiri kuda kugamuchira aya kutaurirana, iwe uchave nemukana wekusarudza kunze kwekugamuchira iwo.
4 KUVIMBIKA UYE KUCHENGETEKA
4.1 Yakatemerwa Kuwana Ruzivo. Isu tinogumira kuwana ruzivo rwemunhu nezvako kune vashandi vatinotenda zvine musoro kuti vanofanirwa kusangana neruzivo irwo kuti vape zvigadzirwa kana masevhisi kwauri kana kuitira kuti vaite mabasa avo.
4.2 Federal Kuteerera. Tine zvimiro zvemuviri, zvemagetsi, uye zvehunhu zvinoenderana nemirau yemubatanidzwa yekudzivirira ruzivo rwevanhu pamusoro pako.
4.3 Inodikanwa Kuzivisa: Motio inogona kugovana ruzivo rwevamwe nemamwe makambani, magweta, zvikwereti zvikwereti, vamiririri kana vamiririri vehurumende mune dzinotevera nyaya:
4.3.1 Kukuvadza. Kana paine chikonzero chekutenda kuti kuburitsa ruzivo urwu kwakakosha kuziva, kubata, kana kuunza matanho epamutemo kune mumwe munhu angave achikonzera kukuvadza kana kukanganisa (nemaune kana asingazivi) kodzero dze Motio, maofficial ake, madhairekita kana kune chero munhu anogona kukuvadzwa nezviitiko zvakadaro;
4.3.2 Kutevedzwa Kwemutemo. Kana ichitendwa mukutenda kwakanaka kuti mutemo unozvida;
4.3.3 Kudzivirirwa. Wako Motio Ruzivo rweAccount ndeye password-yakachengetedzwa.
4.3.4 SSL-Encryption. Mazhinji mapeji pane iyo Motio Webhusaiti iri kufufutirwa kuburikidza ne https kuitira kuchengetedza kufambiswa kwedata.
4.3.5 Kiredhiti Kadhi Kugadziriswa. Kiredhiti kadhi kutengeserana kunoitwa neyakagadzwa yechitatu-bato kubhengi uye ekugadzirisa vamiririri. Hapana nhamba dzekadhi rechikwereti dzakachengetwa pairi Motio Webhu Servers. Iwo ekugadzirisa vamiririri vanogashira ruzivo pamusoro pe128-bit SSL kubatana kunodiwa kuti uone uye kubvumidza kiredhiti kadhi rako kana rumwe ruzivo rwekubhadhara. Zvinosuruvarisa, hapana kufambiswa kwedata pane internet kana network kunogona kuve 100% yakachengeteka.
4.3.5.1 kune kuchengetedzeka uye kuvanzika kweinternet izvo zviri pamusoro pekutonga kwedu;
4.2.5.2 kuchengetedzeka, kuvimbika, uye kuvanzika kwechero ruzivo uye ruzivo rwakatsinhaniswa pakati pedu newe kuburikidza nemawebhusaiti hazvigone kuvimbiswa; uye
4.2.5.3 chero ruzivo rwakadai nedata zvinogona kutariswa kana kukanganiswa mukutama neumwe munhu. Kana iwe usiri kuda kupa yako yemunhu ruzivo kana kuyedza kupedzisa kunyorera.
5.0 ZVINHU ZVINOGONESESA PANO PUREZANO
5.1 Dzidzo kuPolitiki. Motio inochengetera kodzero yekuchinja iyi Yakavanzika Policy chero nguva nekutumira kudzokororazve kune ino Webhu peji. Shanduko dzakadai dzinoshanda pakuburitsa.
6.0 MIBVUNZO NESHURE
6.1 Mhinduro. Kana iwe uine mibvunzo kana mazano, ndapota zadzisa "Taura nesu”Fomu.